ubukhulu Sandblasting Media Market kulindeleke ukuba ukufikelela USD 441,9 yezigidi ngo 2023 - China Shanghai Bosun Abrasive
ubukhulu Sandblasting Media Market kulindeleke ukuba ukufikelela USD 441,9 yezigidi ngo 2023
Sandblasting ubungakanani Media Market kulindeleke ukuba lukhule 6,5% CAGR ukususela ngo-2016 ukuya 2023. yesayizi yemakethi sandblasting eendaba Global, ngokubhekiselele umthamo, kulindeleke ukuba lukhule nje phantsi-6% CAGR. US sandblasting yesayizi yemakethi eendaba ukuba idlule USD 96 yezigidi ngo 2023.
iinkqubo uqhushumbiso iirobhothi kuyanda yamkelwa ukwenzela ukuphucula imihlaba sandblasting yesayizi yemakethi eendaba kwiindawo apho iimfuno zolawulo lomgangatho akaqhotyoshelwanga bahluthe yi izisombululo esizisebenzelayo standardised. Industries kuquka aerospace, izithuthi, unyango kunye neeletroniki zisebenzise eli izixhobo izicelo eziliqela kubandakanya ukususwa eziphathekayo, isiqabu ntshikilelo, ukucocwa sokubumbela, ukulungiswa komhlaba, ukususwa ukutyabeka wadubula peening.
Iimpawu ozikhethelayo wanikela ezifana alawulwa servo positioner rotary, ulawulo flow eendaba ezenzekelayo, ulawulo xi kwexilongo oluzenzekelayo, rotary incula ubunakho, ukuqokelelwa kwedatha isiko, isizukulwana ingxelo, ukuchacha ezenzekelayo kusenokwenzeka ukuba siqhutywe imfuno. US sandblasting yesayizi yemakethi eendaba kuqikelelwa ukuba idlule USD 96 yezigidi ngo 2023.
Sandblasting izicelo kwimarike eendaba ziquka ukusetyenziswa abrasives ukunciphisa, roughen, imiphezulu agudileyo, ezicocekileyo okanye yeenzipho, okanye ukususa izinto yokulungisa imilinganiselo kumphezulu okanye iimilo. Ukongeza, ezi amasuntswana esirhabaxa nazo kusetyenziswa iintlobo camera, banamathele kwizicelo eziliqela kuquka ipolishi, ukusika, umphezulu kubekho nokuyifeza, nasekugayeni. Industries ezifana zokwakha, izithuthi, aerospace kunye noshishino ziinkalo ekupheleni-ukusetyenziswa enkulu.
nokuqonda Key evela kwingxelo ziquka:
Aluminium oksayidi market uqhushumbiso esirhabaxa accounted for kwama-10% kwisabelo shishino ngo-2015 kwaye kulindeleke ukuba lukhule 7,2% CAGR ukususela ngo-2016 ukuya 2023. Olu ezikhethwayo izicelo ezizodwa apho umphezulu wokugqiba ethile Kulindeleke ukuba Mathews iindleko ezongezelelekileyo.
idubule Steel kumahlalutye kulindeleke ukuba bafumane isabelo esikhulu kushishino ukususela ngo-2016 ukuya 2023 ngenxa nokusetyenziswa kakhulu kwi Ngokufutha zokucoca icandelo sokususwa isikali okusila, ulipeyinte namhlwa ukusuka kumphezulu zentsimbi.
share dust market sandblasting eendaba alawule ukusetyenziswa jikelele ngo-2015 Le imfuno kakhulu luphumba Asia Pacific, apho impahla ifumana ukusetyenziswa kakhulu ngenxa yokungabikho imimiselo ezifana nezo kubonakala kumazwe ezingundoqo aseYurophu, kwakunye ixabiso indawo ephantsi kuthelekiswa izinto ezizezinye.
Asia Pacific sandblasting share kwimarike eendaba obephethe-45% ngo-2015 ebalulekileyo kwicandelo leemveliso ezingoomahambehlala nokukhula inkcitho yeziseko kukholekileyo kule ngingqi.
ixesha Post: Aug-15-2016